Muwaadin u dhashay dalka Ingiriiska oo maanta la soo taagay Maxkamadda gobolka Banaadir.
Maxkamada gobolka Banaadir waxaa maanta la horkeenay muwaaidn u dhashay dalka Ingiriiska, kaasoo gacanta laamaha amaanka ee dowladda ku jiray mudo lix bilood ah.
Ninkan oo lagu magacaabo Antony Thomas Cox waxaa la qabtay 19kii bishii January, xili uu ku qornaa diyaarada Turkish Airlines, waxaana laga shakiyay walax laga dhex-helay boorso uu watay taasoo loo maleeyay qarax, wallow markii danbe ay noqotay gasac qiiqa dadka kaga ilmaysiiya ah.
Saraakiil ka tirsan Maxkamada gobolka Banaadir ayaa Warbaahinta Mustaqbal u sheegay in Mr Cox o 48-sano jir ah maanta ay bilaabatay dhageysiga Kiiskiisa, iyadoo Maxkamada maanta ku koobneyd oo kaliya u fariisiga Koowaad ee Dacwadiisa, waxaana dhacday fadhigii u horeeyay.
Waxa uu mudooyinkan ku xirnaa Xabsiga Dhexe, kaasoo eedaha loo heysto ay qeyb ka tahay inuu khal-khal galiyay amniga guud ee dalka iyo inaanu usheegin hay’adaha amniga walax laga shakiyay oo boorsadiisa laga helay.
Antony Thomas Cox oo sidoo kale heysta dhalashada dalka France ayaa mar waxaa soo shaac baxday in Koox ay ku weerartay gudaha Xabsiga Dhexe ee uu ku xirnaa, iyadoo dhaawcayo aan buurneyn laga gaarsiiyay qeybo kamid ah jirkiisa.
Sida wararku sheegayaan, Eedaysanaha ayaa wajahaya dacwad la xiriirta qodobka 332-531, taasoo ku xusun Xeerka Ciqaabta Soomaaliyeed, iyadda go’aanka ugu dambeeya ay gaari doonto maxkamada sare ee dalka.